Tag: kubhengi | Martech Zone
Tsvagiridzo Yakanaka, Mhedzisiro Mhedzisiro
China, May 14, 2020 China, May 14, 2020 Douglas Karr
Methodify ndeyemuchina wekutsvagisa musika chikuva uye ndeimwe yezvishoma pasirese zvakanyatso gadzirirwa kuti zviitise rese rekutsvagisa. Ipuratifomu inoita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kumakambani kuwana zvakakosha zvevatengi pamatanho ese eiyo chigadzirwa kuvandudza uye kushambadzira maitiro kuitira kuita zvirinani bhizinesi sarudzo. Kutora iyo nhanho kuenda kumberi, Methodify yakagadzirirwa kuve yakasarudzika, ichipa makambani mutengi mhinduro kune chero mhando ye
Mugovera, Kubvumbi 26, 2014 Chishanu, April 25, 2014 Douglas Karr
Paavhareji, vanyoreri vanogashira mameseji ekutengesa eemail makumi mana nematanhatu pamwedzi… iwo maemail mazhinji kune wepakati munhu. Vanhu vazhinji vanoverenga maemail anobata nemari yavo uye nekufamba kupfuura chero chimwe chikamu ... uye zvakakosha kuti uzive kuti vanyoreri havasi kungonyorera kuemail yako - vari kunyorerawo kumukwikwidzi wako. Kuona kuti yako email yakagadzirirwa zvakanaka uye inoteerera kune nhare mbozha idiki chaiyo. Kuva neemail inomanikidza ndeya
Bata Makambani Kuzvidavirira
Chipiri, February 8, 2011 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Ini ndaigona kugovana dzimwe huru dzinotyisa nyaya newe pane yangu nhoroondo nemabhangi nemakadhi echikwereti. Zvimwe zvacho zvakabvumwa kuti imhosva yangu asi zvizhinji zvacho zviito zvisina musoro zvemabhangi. Hameno kuti vakomana ava vanorara sei usiku… mari zhinji, mabhailouts, mabhonasi epamusoro uye mari dzefesheni dzisina musoro hadzina kana kuvabvisa kuti vavandudze masisitimu avo. Heino muenzaniso wakanaka… bhizinesi rangu kiredhiti kadhi rakadzimwa kaviri ndichifamba.